Zikuphi izindawo zokudlela ezihlinzeka ngabodwa? | Martech Zone
NgoMsombuluko, Juni 25, 2007 NgeSonto, Septhemba 30, 2012 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi ngiba nemibono eyizigidigidi zamarandi. Ngeshwa (noma ngenhlanhla), angikaze ngibe nemali yokutshala imali emibonweni yami eyizigidigidi. Ngiyethemba ukuthi othile uzongithathela le ndaba.
I'm overweight. It's a combination of bad eating habits and a sedentary lifestyle. Both are my fault. And when I go out to eat, no matter where I go, serving sizes are HUGE. Even if I order a small veggie sub, it's at least 2 servings. Did you know the average American serving at a restaurant is about izikhathi 5 usayizi ojwayelekile wokuphaka? Hawu!
Izinkampani ezifuna ukuthi abasebenzi badle ziphilile zinga-oda kuphela endaweni yokudlela enjengale.
Umugqa wethegi ka-Une Assiette uzoba lula, akunjalo? Ngiyathanda, “Gwema i-Huge Assiette eno-Une Assiette!”. Noma ngubani othatha lo mbono futhi asebenze nawo, ngingajabulela ukudlula kokudla kwempilo yonke.
Sicela ufake nophudingi.
Jun 25, 2007 ku-8: 54 PM
Benginombono ngaleyo migqa kanye, ngamafutha aphansi kuphela. Indawo yokudlela yayizobizwa ngeJack Sprats. Ngandlela thile, angicabangi ukuthi bekuzosebenza. Mina, ngizoba yisigaxa uma bekufanele ngigijime kuscabha wokunyathela ukuze ngivule amandla ikhompyutha yami.
Jun 25, 2007 ku-9: 20 PM
Sawubona, nginawe ngosayizi wokuphaka. Angazi ukuthi kungani izindawo zokudlela zicabanga ukuthi abesifazane badla njengezandla zasepulazini ngemuva kosuku olumatasa! Ngithanda ama-servings amancane ngokuthinta oku-gourmet.
Unganciphisa usayizi wesisu sakho ngezinsizakalo ezincane.
Izindaba ezinhle kakhulu ukuthi ungazivocavoca umzimba ngokuhamba izimbobo eziyi-18 enkundleni yegalufu!
Jun 25, 2007 ku-10: 41 PM
haha .. ngiyayithanda iposi ehm .. ngiqonde umqondo.
btw, uma ungadla endaweni yokudlela kaningi, ungahle uthathe isikhathi sokuya ejimini angithi? 🙂
UJun 26, 2007 ngo-8: 05 AM
Uqinisile impela! Ngokwethembeka, angiyidingi ngisho nejimu… nje ibha yegwababa ukukhipha isithupha sami esihlalweni bese ngihamba. Ngiyasebenza ngakho. Kubukeka sengathi lapho ngibhala kakhulu ngakho, ngiba nesisusa esikhulu sokwenza.
Jun 25, 2007 ku-10: 45 PM
Okwama-dessert ungakhetha phakathi kwamaphakethe wokudla okulula ayi-100 akhonza ezitsheni ezincane ukuze kubukeke njengokuningi…
UJun 26, 2007 ngo-5: 37 AM
Njalo lapho ngivakashela e-US ngifaka uhhafu wetshe kungakapheli isonto elilodwa. Ngisebenze e-NY amasonto ama-3 (ngesihloko sokwethulwa kwe-GBA) futhi bebephuza isiphuzo samahhala futhi lapho ngiyalela i-sub enkulu ngathola ukubukeka okuhlekisayo, kwavela futhi ngifunga ukuthi ngabe yondla umndeni we-5!
Ngiyakuthanda ukudla kepha ilungelo lakho leDoug ngoba osayizi bakhulu kakhulu kudala isiprofetho esizigcwalisayo.
Kepha kufanele ngithi ngiyamkhumbula impela uTwinkies! unkulunkulu balutha kakhulu. Kepha isinkwa sakho simunca, asikho isinkwa esinoqweqwe? kumayelana nani lokho?
UJun 26, 2007 ngo-8: 09 AM
Isinkwa esigaxekile kunzima kakhulu ukusithola! Ngiyacabanga I-Panera Bread is the shot abaseduze… the nezitolo ezinkulu nje ncela plain.
Hlala kude nalawo ma-Twinkies! Ngicabanga ukuthi bangabamba izimfihlo zokumisa izidumbu zakudala!
UJun 26, 2007 ngo-5: 52 AM
Ngiyavuma ngokuphelele! Ngikucabange kaningi lokhu kepha angikaze ngicabange ukuba nendawo yokudlela ezinikezelwe ngokuphelele kwizinsizakalo ezingashadile (umbono omuhle). Futhi usekhasini elifanayo nami. Anginandaba nokuthi indawo yokudlela ingikhokhisa inani elifanayo nokudla okugcwele kwesabelo. Nginike ukudla okuncane nje !!
UJun 26, 2007 ngo-9: 27 AM
Kuzwakala sengathi ungaba yisikhulumi seSitimela esilandelayo, noma cha. Ngokuzimisela, ngiye ngaziwa ngokususa izikali ngamakhilogremu angama-30 ngaphezulu. Kodwa angisoze ngadla endaweni yakho yokudlela. Ngisebenza ukunciphisa umzimba ekhaya. Uma ngiphuma, konke kuphumela emnyango. Kufanele ngizijabulise ngesinye isikhathi.
Jun 26, 2007 ku-12: 53 PM
Inkinga yami imnandi nsuku zonke, Lewis! 🙂
Enye inkinga lapha e-Indy ukuthi sigcwele izindawo zokudlela nezitolo ezinkulu. Angikwazi ukucabanga 'ngesitolo esisekhoneni' esinokudla okusha lapho bengingathatha khona isidlo sakusihlwa esinempilo ukupheka ngalobo busuku. Futhi - ngawo wonke amaketanga, cishe akukho zindawo zokudlela ezikhethekile eziseduze.
Ngikukhumbula ngempela izindawo zokudlela ezinhle zemifino ezisentshonalanga ezazingu-'Mama & Pop 'lapho ungathola khona isidlo esimnandi nezingxenye ezilinganisiwe. Kwakungabizi, futhi.
Yinto okufanele ngiyilume inhlamvu bese ngikhuthazeka. Izaba ezanele! Ngingakwenza uma ngizama.
UNathania Johnson - I-Classic Movie Lounge
UJun 26, 2007 ngo-9: 50 AM
Lapho ukudla kwe-Atkins kwakuyimfashini enkulu, nganginombono ngendawo yokudlela enama-carb aphansi. Bekungafakwa izingqwembe ezinenkukhu, inhlanzi, ne-steak kepha esikhundleni samafries aseFrance, ungathola izinti zesanqante. Kungasiza kuphela ama-Diet colas, iwayini, amanzi (azikho iziphuzo ezinoshukela). Futhi ngophudingi, ungaba namajikijolo ahlanganiswe nokhilimu ophehliwe.
Ngibe nombono, engicabanga ukuthi uyenziwa manje, ngesikebhe sokudla. Uhamba ngesikebhe, lapho yonke into ifaka konke. Futhi inokudla okunempilo kuphela. Ungahlangana nezazi zokudla kanye nabaqeqeshi futhi ungagxuma noma ugcine ukudla kwakho. Ngicabanga ukuthi amaholide isikhathi lapho abantu begxuma ngokudla, ngakho-ke lokhu kungaba yindlela yokubaleka ngaphandle kokungena enkingeni.
Jun 26, 2007 ku-6: 43 PM
Angikhathazeki ngezingxenye ezisindayo ezindaweni zokudlela ezisendaweni yokubeka isisindo b / c nginenhlanhla yokuthola umzimba osheshayo. Kodwa-ke, ukudla izingcezu ezinkulu zokudla kungenza ngibe livila futhi ngilele ngokumangalisayo.Ukuze ngixazulule le nkinga ngivame ukucela ipuleti elengeziwe, elinye lamapuleti okhangayo, bese ngihambisa izingxenye zokudla kupuleti bese ngidla kukho. Uma ngisalambile ngingathola okuningi kupuleti lami “lokuphaka”. Ngimane ngiphatha ipuleti lokudla engilinikwa njengepuleti lokuphaka futhi ngithola ukuthi kuvame ukuba nokuningi engingakuthatha ngiphinde ngikwenzele ekhaya okungenani ukudla okukodwa.
Jun 26, 2007 ku-11: 23 PM
Enye indlela yokuthi lokhu kusebenze ukubeka amathelevishini ezindawo zokudlela esiteshini sezilwane zasendle… lokhu kwenzeke kimi endaweni yaseTai engithanda ukuya kuyo. Ayikho into engabulala isifiso sokudla ngokushesha okudlula ukubuka inqe likhetha isidumbu se-elk ngenkathi uzama ukudla…
Jun 28, 2007 ku-2: 23 PM
Nginomunye umqondo omuhle. Ngifisa sengathi ngabe bekukhona uchungechunge lukazwelonke lwama-franchise lwezindawo zokudlela zabaqaphi besisindo. Ngingadla ngokuphelele lapho. Ukube bengingaya endaweni yokudlela ebikwazi ukupheka ukudla ncamashi ngokwezinhlelo zamaphoyinti ezinconyiwe ze-Weight Watcher ngicabanga ukuthi leli lizwe lingahle lilahle izinkulungwane zamakhilogremu ngomzuzu.
Ngilahlekelwe cishe ngama-lbs ayi-10 kuma-Weight Watchers manje futhi ngicabanga ukuthi ukube bebengakhetha lokho bengizoba namaphathi ezinsuku zokuzalwa ezingane zami lapho (uma nginawo) ukuze bakwazi ukujabulela ukudla okungewona amafutha noma okuphansi okunamafutha ngesikhathi semicimbi. awasekho amaswidi namakhekhe nama-hamburger anamafutha avela kwaMc Donalds, ngingathanda nesigaba sezingane.